१२ मध्ये यी ३ राशीका युवती हुन्छन् सबैभन्दा उत्तम, तपाईको कुन ! – Online Khabar 24
१२ मध्ये यी ३ राशीका युवती हुन्छन् सबैभन्दा उत्तम, तपाईको कुन !
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार जम्मा १२ राशि हुने गर्दछन्। राशि अनुसार सबै व्यक्तिको स्भाव पनि फरक फरक हुने गर्दछ।
आज हामी तपाईलाई तीन यस्तो राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन राशिका युवती देखेर पुरुष फिदा हुने गर्दछन्।
वृष राशि वृष राशि हुने युवतीको व्यक्तित्व निकै आकर्षक हुन्छ । पहिलो भेटमै पुरुषहरू यी राशिका युवतीप्रति आकर्षित हुने गर्दछन्।
यो राशिका युवती निकै मेहेनती हुन्छन् र आफूले गरेको काममा सहजै लक्ष्य हासिल गर्छन्। यिनीहरूको बोल्ने शैली एवं सुन्दरताले सबैको मन लोभ्याउन सक्छ । यिनीहरू सौन्दर्य एवं कलाप्रेमी हुन्छन् । कला क्षेत्रमा सजिलै सफलता हात पार्न सक्छन् । यिनीहरूको दिमागमा सदैव थुप्रै योजनाहरू बनिरहेका हुन्छन् ।
मिथुन राशि मिथुन राशिका युवती झट्ट हेर्दा निकै सुन्दर तथा आकर्षक मानिन्छन्। यिनीहरूको स्वभावले पुरुषहरूलाई सजिलै आकर्षक गर्ने गर्दछ। यिनीहरूको पुरुष साथी अधिक हुन्छन् । महिला मित्रहरू पनि कम हुँदैनन्।
यो राशिका युवतीमा अर्काको मनको कुरा बुझ्ने अलौकिक क्षमता हुन्छ । यिनीहरू बहुमुखी प्रतिभाका धनी तथा चलाखीपूर्ण तरिकाले काम गर्ने खालका हुन्छन् । यिनीहरू दिमाग लगाउनुपर्ने वा बुद्धिसँग सम्बन्धित काममा बढी सफल हुन्छन्।
वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका युवतीको स्वभाव, व्यवहार एवं चालचलन आकर्षक मानिन्छ। यिनीहरूमा अर्काको मनको कुरा थाहा पाउने क्षमता हुन्छ।
यो राशिका युवती हेर्दा बढी सुन्दर नभए तापनि यिनीहरूमा एक किसिमको फरक चुम्कीय आकर्षण हुन्छ। यिनीहरूको कुराकानी गर्ने आफ्नै प्रकारको विशेष शैली हुन्छ। यो राशिका युवती बहादुर तर भावुक हुन्छन्। यिनीहरूको मस्तिष्क तीक्ष्ण हुन्छ। यिनीहरूलाई कसैले पनि सजिलै बेवकुफ बनाउन सक्दैन। यिनीहरुलाई सबै कुरामा सफा चाहिन्छ।
साभार गरियको खबर ।
Prevसुसान्त राजपुतकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती फेरी चर्चामा, सलमान खानले दिए यस्तो अनौठो अफर, सबै चकीत !
nextवर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको क’र्म थाहा पाउँदा श्रीमान अं’गालो हालेर रोए